Mawduucyada Macluumaadka Webka Wareeg: Miyuu Jidka Ugu Fiican Si Loogu Helo Macluumaadka Webka? - Ciriiri waxay bixisaa jawaabta
Macluumaadka laga helo bogga ma aha had iyo jeer shaqo fudud. Waxaad horay isku dayday wax walba si aad u heshid goobo ku jira xogta aad rabto laakiin aanad soo dejisan karin ama nuqulin kari weyday. Si kastaba ha ahaatee, ha ka tegin! Waxaa jira siyaabo siyaado ah oo lagu heli karo xogta hab ku habboon oo wax looga qaban karo:
Waxaad ka heli kartaa xog ka timid APIs-ku-saleysan (interfacing program). Codsiyo badan oo internetka ah sida Facebook iyo Twitter ayaa bixiya interfaces taasoo oggolaanaysa inay si fudud u helaan xogtooda. Waa wax fudud in la helo xogta ganacsiga iyo xitaa dawladda iyada oo adeegsanaysa interfiyuutar.
Waxaad sidoo kale ka saari kartaa xogta PDFs. Si kastaba ha noqotee, ma noqon karto mid sahlan maadaama PDF uu yahay mid ku habboon daabacadaha. Waxaa jira fursado aad lumin karto qaabka xogta loo baahan yahay markaad ka soo degto PDF.
Waxaa jira habka ugu sareeya ee loo soo saaro xogta webka - macluumaadka soo saarista adoo isticmaalaya website .
Maxaan u Isticmaali Karaa Mawduuc Website ah?
Iyadoo la tixgelinayo nooca isbeddelka mowduucyada laga heli karo internetka iyo sidoo kale kakanaanta naqshadaha web-ku salaysan, waxaa jira sababo badan oo weyn sababta oo ah inaad ka fikirto isticmaalka shabakada bogga si aad u hesho macluumaadka aad u baahan tahay. Halkaan waxaa ku qoran warbixin kooban:
Xaddidaad-yareyntu waa waji aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad dooranayso hab aad ku heli karto xogta shabakada. Ficil ahaan, macnaheedu waa inay xadidan tahay tirada marxaladaha booqdaha ay heli karaan goobta iyagoo aan loo tixgelin DDoS (loo diido adeegga. ) weerarka. Haddii aad rabto in aad ka hesho inta ugu badan ee aad ka heshid xogtaada, waxaad isticmaashaa qodobbada internetka . Inta badan bogagga ma difaacaan mawduucooda ka soo jiidashada si aad u hesho macluumaadka loo baahan yahay iyadoon wax arrin ah.
Joogi magacaaga intaad xoqineyso
Haddii aad rabto inaad ka hesho macluumaadka bogga si gaar ah, bogga boggu waa habka ugu wanaagsan ee lagu. Waraaqaha mawduuca ee internetku waxay kuu oggolaanayaan inaad sameyso codsiyo fudud HTTP adiga oo aan diiwaangelin. Marka laga reebo cookies iyo cinwaanka IP, ma jiraan wax kale oo keeni kara maamulka goobta aad.
Webka qashin-qaadku wuxuu kaa helayaa xogta la heli karo
Webka xajinta maaha cilmi baaris. Uma baahnid inaad la xiriirto qof kasta oo ka tirsan ururka ama sugo bogga si loo furo API. Kaliya tiri qaababka aasaasiga ah ee aasaasiga ah iyo waraaqahaaga boggaaga ayaa sameyn doona inta kale ee shaqada.
Waxaad isticmaali kartaa waraaqaha webka si aad ugu hesho dhammaan noocyada xogta laga soo bilaabo. Sidaas daraadeed, habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo xogta webka marka la barbar dhigo farsamooyinka farsamaynta xogta kale. Waqtiga xiga waxaad dooneysaa inaad ka hesho wax macluumaad ka ah shabakada, isticmaal bogga xajmiga naaquska iyo shaqadaada waxay noqon doontaa mid sahlan oo xiiso badan weligeed Source .